Nhoroondo yeIndonesia | Kutsunga Kuita Basa Pasinei Nokubhanwa
Hama dzichiita gungano panguva yekubhanwa kweZvapupu, vamwe vachiteerera vari muchikepe
Hama dzekubazi padzakaziva kuti basa redu rakanga rabhanwa, dzakatanga kumhanya-mhanya. “Takatora mapepa edu aiva nezvinhu zvaisafanira kuonekwa nemunhu wese wese, uyewo mabhuku edu nemari yebazi, tikanozviviga munzvimbo dzakasiyana-siyana muJakarta,” anodaro Ronald Jacka. “Takatengesa zvivako zvehofisi yebazi, tichibva tatamira kune imwe nzvimbo yakahwanda yatakazotanga kushandisa sehofisi yebazi.”
Hama dzakawanda dzakaramba dzichiita basa dzisingatyi. Dzainge dzatsungirira miedzo yakaoma kusvikira pakazobhanwa Zvapupu zvaJehovha uye dzakaramba dzichivimba naJehovha. Asi dzimwe hama dzakasvikirwa nemuedzo wacho dzakavarairwa. Vakuru vashoma vakatanga kutya ndokusaina mapepa aiti varege kuparidza. Vamwewo vakatengesa hama dzemuungano nekutaura mazita adzo kuvavengi. Hofisi yebazi yakatumira hama dzakakura pakunamata kuti dzinosimbisa ungano uye kuti dzinobatsira vaya vasina kuramba vakatendeka. Hama John Booth, avo vaiva nhengo yeDare Rinotungamirira, vakashanyirawo Indonesia uye vakapa hama mazano anobatsira aiita seari kubva kuna baba vane rudo.
Zviri pachena kuti Jehovha, Mufudzi Mukuru, akanga achisimbisa uye achinyaradza vanhu vake. (Ezek. 34:15) Vakuru vakatanga kuita basa ravo nemazvo vachishingaira muushumiri, uye vaparidzi vakawana nzira itsva dzokuparidza nadzo vachiita basa racho vakangwarira. (Mat. 10:16) Hama dzakawanda dzaitenga maBhaibheri asingadhuri, aishandiswa mazuva iwayo, kubva kusangano reIndonesian Bible Society dzoapa vanhu, uye pakutaura navo dzaipinza mashoko eUmambo nekungwarira pese padzaiwana mukana. Dzimwe hama dzaitora mabhuku edu dzokwachura peji ine mashoko anoratidza kuti ndiani akabudisa mabhuku acho, dzozopa vanhu vanofarira mabhuku acho. Mapiyona akawanda akaenderera mberi nokuparidza achinyepedzera kuita sevanhu vari kufamba vachitengesa zvinhu paimba neimba, sezvakaitwawo nedzimwe hama, Indonesia payaitongwa neJapan.
Margarete naNorbert Häusler
Muna 1977, Dhipatimendi Rinoona Nezvezvitendero rakatangawo kuomesera Zvapupu neimwe nzira, parakaramba kupa mamishinari eZvapupu zvaJehovha mavhiza matsva kuti arambe achigara muIndonesia. Mamishinari akawanda eZvapupu akakumbirwa kuti anoshanda kune dzimwe nyika. * “Mazana ehama nehanzvadzi akauya kunhandare yendege kuzoonekana nesu,” anodaro mumishinari anonzi Norbert Häusler, uyo akashumira pamwe chete nemudzimai wake, Margarete, kuManado, North Sulawesi. “Takasvika pamasitepisi endege ndokumbocheuka. Hama nehanzvadzi dzakatisimudzira maoko, dzichiramba dzichishevedzera kuti: ‘Makaita basa. Makaita basa nokuuya kuno.’ Takabva takwira ndege uye takachema.”
Mashoko okuti Zvapupu zvaJehovha zvakanga zvabhanwa paaipararira muIndonesia, sangano remubatanidzwa wemachechi reIndonesian Communion of Churches rakakurudzira nhengo dzaro kuti kana dzikaona Zvapupu zvichiita chero chii zvacho chine chokuita nokunamata, dziende kunozvimhan’arira. Izvi zvakaita kuti Zvapupu zvaiva pazvitsuwa zvakawanda zvisungwe uye zvibvunzurudzwe.
MuWaingapu iri pachitsuwa cheSumba, mukuru wemasoja akashevedza hama 23 kukamba yemasoja, akaedza kudzimanikidza kuti dzisaine gwaro raiti dzisiye chitendero chadzo. Hama padzakaramba, mukuru wemasoja wacho akadziudza kuti dzidzoke kukamba mangwana acho, uye urwu rwaiva rwendo rwemakiromita 14 kuenda nekudzoka dzichifamba netsoka.
Hama padzakadzoka zuva rakatevera racho ari mangwanani-ngwanani, mumwe nomumwe wavo aishevedzwa opiwa gwaro racho kuti asaine. Kana hama ikaramba, masoja aibva airova neshamhu dzeminzwa. Masoja acho airova zvokupenga zvokuti dzimwe hama dzaisiiwa dzafenda. Panguva iyoyo, dzimwe hama dzainge dzakamirira jana radzo. Imwe hama yechiduku yainzi Mone Kele yakazoenda kumberi ndokunyora pagwaro racho. Hama dzakarwadziwa chaizvo, asi mukuru wacho wemasoja akatanga kupengereka nehasha. Mone akanga anyora kuti, “Ndinoda kuramba ndiri Chapupu chaJehovha kweupenyu hwangu hwese!” Mone akarohwa akakuvara zvokuti akapedzisira ava muchipatara, asi kunamata kwake hakuna kukuvadzwa.
Kwemazuva 11, mukuru wacho wemasoja akaedza kuita kuti hama idzi dzisaramba dzakaperera kuna Jehovha. Akaita kuti vaswere vakamira vachigochwa nezuva. Akavamanikidza kuti vakambaire kwemakiromita akati kuti, uye kuti vamhanye madaro akareba vakatakura zvinhu zvinorema. Akaisa mumwe nomumwe wavo banga pahuro, akavaudza kuti vasarute mureza asi hapana akabvuma. Saka akabva ati varohwe zvakare.
Mangwanani oga oga hama dzaifamba zvishoma nezvishoma nemhaka yemarwadzo, dzakananga kukamba yemasoja dzichinetseka kuti kutambudzwa kwerudzii kwadzaizosangana nakwo zuva iroro. Vari munzira, vainyengetera pamwe chete uye vaikurudzirana kuti varambe vakavimbika. Manheru oga oga vaidzokera kumba vasingachagoni kufamba, vakuvadzwa uye vakazara neropa, asi vachifara kuti vakanga varamba vakatendeka kuna Jehovha.
Hofisi yebazi payakanzwa kuti hama dzaishungurudzwa, yakabva yanyora materegiramu ichinyunyuta nemabatirwo aiitwa hama, ndokuatumira kuvakuru vemasoja vaiva muWaingapu, muTimor, muBali, uye kumukuru mukuru wemasoja muJakarta nevamwewo vakuru vakuru vehurumende. Mukuru wemasoja wemuWaingapu paakaona kuti utsinye hwake hwafumurwa muIndonesia yose, akanyara uye akabva arega kutambudza hama.
“Zvapupu zvaJehovha Zvakaita Sezvipikiri”
Mumakore akatevera, Zvapupu zvakawanda muIndonesia yose zvaimbovharirwa kwechinguva, zvaibvunzurudzwa, uye zvairohwa. “Mune imwe nzvimbo, hama dzakawanda dzakanga dzabviswa mazino epamberi nekurohwa,” anodaro mumishinari anonzi Bill Perrie. “Padzaisangana neimwe hama inenge ichine mazino epamberi, dzaibva dzabvunza dzichiseka kuti: ‘Asi uri mutsva? Kana kuti wakamboramba kuva Chapupu?’ Pasinei nemiedzo yavakasangana nayo, vaya vakatambudzwa vakaramba vachifara uye vachishumira Jehovha nemwoyo wose.”
“Kugara mujeri kwakandidzidzisa kuvimba naJehovha kupfuura zvandaiita, uye kwakatoita kuti ndiwedzere kusimba pakunamata”
Mumakore 13 akatevedzana, Zvapupu 93 zvakatongerwa kugara mujeri uye zvaipiwa mitongo iri pakati pemwedzi miviri kusvika kumakore mana. Kushungurudzwa ikoko kwaiitwa hama kwakatodzisimbisa kuti dzirambe dzakavimbika kuna Jehovha. Pashure pekunge agara mujeri kwemwedzi 8, Musa Rade akashanyira hama dzekwaaigara kuti adzikurudzire kuramba dzichiparidzira. “Kugara mujeri kwakandidzidzisa kuvimba naJehovha kupfuura zvandaiita, uye kwakatoita kuti ndiwedzere kusimba pakunamata,” akadaro Musa Rade. Ndosaka vanhu vaiona zvaiitika vakasvika pakuti: “Zvapupu zvaJehovha zvakaita sezvipikiri. Paunoramba uchivarova, kutenda kwavo kunorambawo kuchidzika midzi.”
Vaparidzi vari munzira kuenda kunoparidza kuAmbon, muMaluku
^ ndima 1 Peter Vanderhaegen naLen Davis vainge vashumira semamishinari kwenguva yakareba, vakanga vapfuura zera rokuenda pamudyandigere uye Marian Tambunan (aimbonzi Marian Stoove) ainge aroorwa nechizvarwa chemuIndonesia, saka vakabvumirwa kugara muIndonesia. Vose vari vatatu vakaramba vachishingaira pakunamata uye ushumiri hwavo hwakava nezvibereko panguva yainge yakabhanwa basa redu.
Indonesia: Vakatsunga Kuramba Vachiita Basa